Linux Mint 18.2 Sonya yave kuwanikwa kune wese munhu | Linux Vakapindwa muropa
Linux Mint 18.2 Sonya yave kuwanikwa kune wese munhu
Pakutanga kwaChikunguru, timu yeClem yakazivisa kuburitswa kweLinux Mint 18.2 Sonya, vhezheni nyowani yekuparadzirwa kunozivikanwa. Iyo vhezheni iyo mune ino kesi yakakosha kubvira kwekutanga kekureba, pane zvinoenderana vhezheni yeavo ese epamutemo kuravira kweLinux Mint.
Ndokunge, isu tine Linux Mint 18.2 Cinnamon, Linux Mint 18.2 MATE, Linux Mint 18.2 KDE uye Linux Mint 18.2 XFCE. Ese mana edhisheni eLinux Mint ayo asingawanzo kubuda achibuda panguva imwe chete.Shanduko mushanduro iyi hadzina kukosha kana ichienzaniswa neshanduro yapfuura. Ivo vanonyanya kupfupikiswa mu kuoneka kweMintUpdate-Chishandiso, mukuvandudzwa kweBlueberry (iyo bluetooth maneja) uye kuiswa kweXApps seyakajairwa.
ari XApps mashandisirwo akareruka anotsvaga kuzadzisa basaSaka isu tine Anwendung iyo yakafanana nebhuku rerugwaro, imwe iri vhidhiyo inoridza, imwe inoratidza pdf mafaera, imwe inoratidza mifananidzo, nezvimwe ... The XApps ari mune ese mavhezheni eLinux Mint 18.2 Sonya kunze kweshanduro ne KDE. Cinnamon 3.4 ndiyo yazvino Linux Mint desktop vhezheni iri mune iyi vhezheni, MATE 1.18 ndiyo MATE edition vhezheni uye Plasma 5.8 ndiyo KDE edition vhezheni. Linux Mint 18.2 Sonya anotevera yakavakirwa paUbuntu 16.04, ine Linux kernel 4.8 uye mamwe mapurogiramu eUbuntu. Mune iyi vhezheni hatisisina MDM semaneja wechikamu asi LightDM.
Kuti tigadzirise kugovera, isu tinongofanirwa kuenda ku iyo Software Gadziriso chishandiso. Kana tangovandudza, mune terminal tinonyora zvinotevera:
Mukana wekushaya Linux Mint, isu tinofanirwa kuenda ku iyo yepamutemo webhusaiti uye kurodha pasi iyo yekuisa ISO mufananidzo. Mushure memaminetsi akati wandei ekumisikidza, tichava neiyi «menthol Ubuntu» pakombuta yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Linux Mint 18.2 Sonya yave kuwanikwa kune wese munhu
Joaquín García anonyora mune iri basa:
»Kana tangovandudza, mune terminal tinonyora zvinotevera:
sudo apt kuisa yakatsetseka-kwaziso lightdm-marongero
sudo apt bvisa mdm
sudo reboot »
Uye ndinoshamisika kuti sei tichifanira kuita izvi? Eya, haazvitsanangure iye ega. Unogona here kupa tsananguro nezvazvo, kunyangwe dai yaive pfupi?
Ruben Suazo akadaro
Imhaka yekuti kana uchigadzirisa kubva paMint 18.1 nekuda kwechimwe chikonzero chandisingazive, hazviite zvoga kugadzirisa iyo Session Manager iyo inoshanduka kubva kuMDC yeM18.1 kuenda kuLightdm kwe18.2.-
Ndakazviita asi ndakasangana nedambudziko rekuti gare gare michina haina kudzima. Yakagara nekusingaperi pachiratidziri cheblack asi isina kudzima, ndaifanira kuidzima panyama nekudzvanya bhatani remagetsi. Solution, ndakadzokera kuna MDM Manager.
Yangu kuravira, kuva neMMM kana Lightdm kushoma kwazvo.
Pindura Ruben Suazo
Kuenda kubva ku linux 17.2 kusvika 18.2 ndinofanira kudzoreredza here kana ndinogona kukwidziridza?
Pierre Aribaut akadaro
Kune mumwe munhu aishandisa kushandisa windows kwemakore mazhinji, zvirinani kushandisa ubuntu linux 16.04.2 kana linux mint 18.2?
Pindura kuna Pierre Aribaut
Charles J. akadaro
Zvirokwazvo LInux Mint;)
Ndinokutendai zvikuru Carlos, mushure mekuedza kugoverwa kweLinux kwakawanda, ini ndinosimbisa kuti Linux Mint 18.2 Cinnamon ndiyo yakanakisa kugovera kune mumwe munhu akashandisa Windows kwemakore, Linux Mint inonzwisisika (ndiyo inonzwisisika zvikuru yandakaona kugoverwa kweLinux) uye inoshanda nemazvo :)
Ndiri kuda kubva kubuntu 14.02 kuenda ku linux, unondipa zano rei
Ubuntu 16.10 ichagumisa rutsigiro rwayo muna Chikunguru 20
Yakaburitswa Kernel 4.12